भारतमा फैलिएको बर्डफ्लु नेपालमा पनि आउला ? – Gandaki Voice
Home/विश्व/भारतमा फैलिएको बर्डफ्लु नेपालमा पनि आउला ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरे कुखुराजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदै उच्च सतर्कता अपनाउन नाकामा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । “नेपालमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट बर्डफ्लू भित्रने सम्भावना उच्च रहेको छ । सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै केही समय हिमाञ्चलसँगै भारतबाट भित्रिने कुखुराजन्य प्रजातिका वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको हो”, उनले भने ।
सन्दिप लामिछानेले आज पनि गरे उत्कष्ट बलिङ